WARBIXIN: Xilli Ciyaareed Cusub, Liverpool-na Weli Waa Sideedii & Seddex Waxyaabood Oo Laga Bartay Kulankii Ay Reds Barbaraha La Gashay Watford - Laacib.net
WARBIXIN: Xilli Ciyaareed Cusub, Liverpool-na Weli Waa Sideedii & Seddex Waxyaabood Oo Laga Bartay Kulankii Ay Reds Barbaraha La Gashay Watford
by Saed Balaleti | Saturday, Aug 12, 2017
1. Xilli ciyaareed cusub, Liverpool-na weli waa sideedii.
Tababare Jurgen Klopp ayaa weli iska indhatiraya halka ay kooxdiisa dhibaatada ka qabto: Liverpool ma ahan koox kubada difaacan karta, inkastoo Virgil van Dijk uu caawin karo hadana dhibaatada heysata waxaa si fiican u xalin kara tababare, iyadoo Klopp uu u baahan yahay inuu caawiye ka dhigto nin khabiir ku ah farshaxanka difaacashada.
In soone wax loo xirto kubadaha koornooyinka waa mid shaqeyn karta, laakiin waa maxay sababta Roberto Firmino loogu xilsaaray inuu kubad ka xirta aaga ugu halista badan? Xiddiga reer Brazil ayaa ku hungoobay inuu sii saadaaliyo dhaqdhaqaaqa Stefano Okaka, kaasoo kubad madax ah oo awood badan hogaanka ugu dhiibay Watford.
Jahwareer kale ayaa dhacay waqtigii dhimashada ciyaarta iyadoo Richarlison loo ogolaaday inuu goolka iska soo galo, mana jirin cid xiraneysay Migeul Britos oo xariiqda goosha taagnaa islamarkaana dhaliyay goolka barbaraha.
Daafaca waa meel u baahan inay Liverpool xal degdeg ah u hesho, inkastoo ay caawinaad ka heli karaan suuqa kala iibsiga, waa qasab in Klopp uu waqti badan ku bixiyo marka ay joogaan garoonka tababarka haddii Reds ay u tartameyso horyaalka ama afarta kaalimood ee ugu sareysa.
2. Mane oo ku soo baxay inuu yahay isha ugu horeysa ee goolasha Reds
Sadio Mane waxa uu noqon doonaa awood muuqata xilli ciyaareedkan haddii uu taam ahaado xilli ciyaareedka oo dhan.
Xiddiga reer Senegal waxa uu leeyahay orod dheereeya, wax baahi ahna uma qabo inuu wado dheer u maro goolka taasoo muhim weyn u aheyd goolkiisii barbaraha.
Waa nin fariid ku ah kubada islamarkaana hal abuur leh, Orodka Mane ayaa inta badan mushkilad ku ah daafacyada, jawaabcelintiisa kubaaha soo laabtana waa mid degdegsiimo badan, dhameystirkiisuna waa mid la hubo.
Romelu Lukaku iyo Harry Kane waxa ay noqon karaa gooldhaliyayaal muuqda, laakiin Mane oo xitaa garab ka ciyaaray ayaa ka qeybgeli kara tartanka gooldhalinta isagoo gaari kara 20 gool ka dib markii uu 13 gool dhaliyay xilli ciyaareedkiisii ugu horeysay.
3. Ciyaaro saaxiibtinimo wax micno ah ma lahan, Moreno waqtigiisa waa soo dhamaaday
Alberto Moreno waa uu ku riyaaqay kulamadii saaxiibtinimo, waxaana uu soo jiitay indho badan isagoo dad badan ka dhaadhiciyay inuu dib u soo kicin karo waayihiisa ciyaareed ee Liverpool.
Jamie Carragher ayaa ku doodayay in Moreno uusan u qalmin in boos uu ka helo shaxda iyadoo lagu qiimeynayo kaliya kulamada saaxiibtinimo. “Ma jecli xaqiiqda ah in Klopp uu ku qiimeynayo kulamada saaxiibtinimo, ma ahan meesha saxda ah ee lagu qiimeeyo.
“Ma jecli xaqiiqda ah inuu fursad ku siinayo wixii uu qabtay ciyaarihii saaxiibtinimo, wuu garanayaa ciyaartoyda, waxa uu la joogay 18 bilood.” Moreno waxa uu ku liitay difaacashada kubada